Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo Janaraal Stephen Townsend. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maamulka Khaatumo oo uu hoggaamiyo Raysuwasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka ahayd ee Carta, Cali Khaliif Galayr ayaa sheegay inuu wadahadal la furay maamulka Somaliland, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Khaatumo. Axmed Xaaji [...]
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta yeelanaya kulankoodii ugu dambeeyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah yeelan doona kulankoodii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan intii lagu guda jiray afartii sanno ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen xubno kamid ah baarlamaanka. Wakhtiga [...]
Koonfur Afrika oo doonaysa in ay ka baxdo Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah
Pretoria-(Puntland Mirror) Dalka Koonfur Afrika ayaa doonaya in ay ka baxaan Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah ee (ICC) sababtoo waajibaadkeedii ayaa isbadalay ee sharciyaynta hoggaamiyaasha diblomaasiyadeed, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada Koonfur Afrika. Wasiirka cadaalada Koonfur [...]